त्रिवि रजिस्ट्रारको मनपरीः आफ्नो बढुवा आफैंले::देश र जनताप्रति समर्पित
त्रिवि रजिस्ट्रारको मनपरीः आफ्नो बढुवा आफैंले
कर्मचारीले आफ्नो बढुवा आफैं गर्न सक्छन् र ? धेरैको उत्तर हुन्छ– सक्दैनन् । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी आफैंले आफ्नो बढुवा गर्न सक्छन् ।
पदमा बस्यो, नियम आफू अनुकुल बनायो अनि बढुवा भइहाल्यो । लामो समयदेखि त्रिवि यस्तै बेथितिको मारमा गुज्रिरहेको छ ।
त्रिविका तीन रजिस्ट्रार पदमै रहेका बेला सहप्रध्यापकबाट प्राध्यापकमा बढुवा भएका छन् । सहप्रध्यापकबाट प्राध्यापकमा बढुवा भएका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती पछिल्ला व्यक्ति हुन् । यसअघि चन्द्रमणि पौडेल र गीताभक्त जोशी आफू अनुकुल नियम परिवर्तन गरेर बढुवा भएका थिए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।
स्नातक प्रथम बर्षकाे परीक्षा तालिका सार्वजनिक, हेर्नुस् परीक्षा केन्द्र सहित
एक विद्यार्थीका लागी त्रिविकाे परीक्षा सार्न पत्राचार, को हुन ति शक्तिशाली बिद्यार्थी ?
त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय एसियाको उत्कृष्ट ३ सयमा
त्रिबिको रोजगार नातागोताको संसार , यि हुन नाम निस्किने र तिनका नातेदार
उपकुलपतिका लागी दौडधुप शुरु कसले मार्लान बाजी ?
त्रिबि सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्नुपर्छ : सिपि गजुरेल